Ihe ị ga-eme ma mmadụ gwusawa gị egwuregwu iberiibe | Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kachin Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Portuguese (European) Quiche Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Telugu Tetun Dili Thai Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Umbundu Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Gịnị bụ egwuregwu iberiibe?
Gịnị ka m kwesịrị ime ma ọ bụrụ na a na-egwusa m egwuregwu iberiibe?
Gịnị Ka M Kwesịrị Ime?
Ọ bụ mmadụ ime onye ọzọ ihe ọ bụla gosiri na ọ chọrọ ka ha nwee mmekọahụ. O nwere ike ịbụ ibi mmadụ aka ebe a na-ekwesịghị ibi ya aka ma ọ bụkwanụ ịgwa ya okwu iberiibe. Ma, mgbe ụfọdụ, ọ naghị adịrị mmadụ mfe ịma ma ọ̀ bụ egwuregwu nkịtị ka a na-egwusa ya, ma ọ̀ bụ ọchụchụ ka a na-achụ ya, ma ọ̀ bụkwanụ egwuregwu iberiibe ka a na-egwusa ya.
Olee otú ị ga-esi mata mgbe mmadụ na-egwusa gị egwuregwu iberiibe? Ị ga-ama azịza ya ma ị zaa ajụjụ atọ a anyị jụrụ gbasara igwusa mmadụ egwuregwu iberiibe.
E nwekwara ike igwusa mmadụ egwuregwu iberiibe mgbe onye ahụ gụcharala akwụkwọ, na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na gị amara ihe ị ga-eme ma mmadụ gwusa gị egwuregwu iberiibe ugbu a, ọ ga-enyere gị aka ịma ihe ị ga-eme ma e gwusa gị egwuregwu iberiibe n’ebe ị na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na i mee ihe ahụ, o nwekwara ike ime ka onye ahụ ghara ime ya ndị ọzọ.
Amaka kwuru, sị:
“Ọ buru na mmadụ na-egwusa gị egwuregwu iberiibe, ọnụ kwesịrị ịka gị aka mgbe ị na-agwa ya ka ọ kwụsị ya. Ndị mmadụ anaghị akwụsị agwa ọjọọ a, ọ gwụkwala ma a gwara ha kwụsị ya. Mmadụ gwusawa gị egwuregwu iberiibe, gwa ya na ị chọghị ya. Ọ bụrụ na ọ chọghị ịkwụsị ya, gaa kọọrọ ya onye ọzọ.”
Chetachi kwuru, sị:
“Mmadụ gwa gị okwu iberiibe, achịrịla ya ọchị. Esokwala ndị ọzọ na-akọ akụkọ iberiibe. Ọ bụrụ na ọ na-abụ mmadụ na-agwa gị okwu iberiibe, gị ana-achịrị ya ọchị ma ọ bụkwanụ na gị na ndị ọzọ na-akọ akụkọ iberiibe, ndị mmadụ ga na-eche na ụdị ihe a dị gị mma. Ha ga na-echekwa otú ahụ ma ọ bụrụ na ndị gị na ha na-akpa na-achụ ụmụ nwoke ma ọ bụ ụmụ nwaanyị.”
O yiri ka ndị mmadụ hà ga-akwụsị igwusa gị egwuregwu iberiibe ma ọ bụrụ na ị mara ihe bụ́ egwuregwu iberiibe na ihe ị ga-eme ma egwusa gị ya. Ka anyị tụlee ihe atụ atọ na ihe ị ga-eme ná nke ọ bụla n’ime ha.
Ifeoma, onye dị iri afọ abụọ kwuru, sị: “N’ebe m na-arụ ọrụ, o nwere ụfọdụ ụmụ okorobịa tọrọ m ezigbo ọtịtọ. Ha na-enye m nsogbu mgbe niile, na-agwa m na m mara mma. Ha na-ekwukwa na ọ dị ha ka ha bụrụ ọgbọ m. Otu ụbọchị, otu n’ime ha bịara m nso, na-akpa m aka ná ntutu isi.”
Ifeoma nwere ike iche na nwa okorobịa ahụ ga-akwụsị ya ma ya gbachie ya nkịtị.
Gịnị mere na i kwesịghị ịgbachi nkịtị? Ndị ọkachamara na-ekwu na ọ bụrụ na mmadụ na-egwusa gị egwuregwu iberiibe ma ọ bụ na-agwa gị okwu iberiibe, gị agbachie ya nkịtị, ọ gaghị akwụsị ya. O nwedịrị ike mewe nke ka njọ.
Kama ịgbachi nkịtị, gbalịa gwa onye ahụ ka ọ kwụsị ya, abakwarala ya mba. Otu nwa agbọghọ dị afọ iri abụọ na abụọ aha ya bụ Ego kwuru, sị: “Ọ bụrụ na mmadụ ebie m aka ebe ọ na-ekwesịghị ibi m aka, m na-agwa ya anwakwala ya anwa mgbe ọzọ. Ọ na-eme ka onye ahụ ghọta na m dị iche.” Ọ bụrụ na onye ahụ akwụsịghị ya, ọnụ ajụla gị oyi. Nọgide na-agwa ya ka ọ kwụsị ya. Baịbụl gwara anyị na ọ bụrụ na mmadụ emee anyị ụdị ihe a, anyị kwesịrị ịkwụsi ike n’ime ihe dị mma. Obi kwesịkwara ịka anyị mgbe anyị na-agwa ya ka ọ kwụsị ya.​—Ndị Kọlọsi 4:12.
Gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na onye ahụ agwa gị na ya ga-emesi gị ike? Ya gwa gị otú ahụ, gbachie ya nkịtị, sikwa ebe ahụ pụọ ozugbo. Gaa kọọrọ ya otu enyi gị tọrọ gị.
Ezinne, onye dị afọ iri na asatọ kwuru, sị: “Mgbe m dị ihe dị ka afọ iri na otu, ụmụ akwụkwọ anyị abụọ jichiri m na paseeji ụlọ akwụkwọ anyị. Ha bụdị ụmụ nwaanyị ibe m. Otu na ụmụ nwaanyị ibe ya na-enwe mmekọahụ, ọ chọrọ ka mụ na ya soro gaa ebe ọ chọrọ ịga. Ajụrụ m na agaghị m eso ya. Ma, ha nọgidere na-enye m nsogbu mgbe ọ bụla onye nkụzi na-anọghị na klas anyị. O nwedịrị ụbọchị ha kwara m aka, mụ akụọ isi n’ahụ́ aja.”
Ezinne nwere ike iche na ọ bụrụ na ya agwa mmadụ ihe merenụ, onye ahụ nwere ike ikwu na ọ maghị nke a na-akọ. O nwekwara ike iche na o nweghị onye ga-ekweta na ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu.
Gịnị mere i kwesịrị iji akọrọ ya onye ọzọ? Ọ bụrụ na ị gaghị kọọrọ ya onye ọzọ, onye ahụ agaghị akwụsị inye ma gịnwa ma ndị ọzọ nsogbu.​—Ekliziastis 8:11.
Kama ị ga-agbachi nkịtị, kọọrọ ya onye ọzọ ka o nyere gị aka. Ọ bụrụ na ị kọọrọ ya papa gị, mama gị, ma ọ bụ ndị nkụzi gị, ha nwere ike ịgwa gị ihe ị ga-eme ka onye ahụ kwụsị inye gị nsogbu. Ma, gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na onye ị kọọrọ ya ewere na ihe ahụ enweghị ihe ọ bụ? Ihe i nwere ike ime bụ, mgbe ọ bụla onye ahụ gwusara gị egwuregwu iberiibe, dee ya n’akwụkwọ. Dee ụbọchị o gwusara gị ya, oge o gwusara gị ya, ebe ọ nọ gwusa gị ya nakwa ihe o kwuru. Nyezie papa gị ma ọ bụ mama gị ma ọ bụkwanụ onye nkụzi gị akwụkwọ ahụ. Ya hụ ya, ọ ga-ama na ihe ị na-agwa ya bụ eziokwu n’ihi na ọtụtụ ndị anaghị eji ihe e dere ede egwu egwu.
Ì chere na ihe ga-aka njọ ma ọ bụrụ na a kọọrọ ya onye ọzọ? Pịa ebe a ka ị hụ ihe Ugochi kwuru.
Ugomma, onye dị afọ iri na asatọ kwuru, sị: “O nwere otu nwa okorobịa m na-atụ ụjọ n’ụlọ akwụkwọ anyị. Ọ dị ezigbo ogologo, buokwa ibu. O kwuru na o nweghị ihe ga-eme ka mụ na ya ghara inwe mmekọahụ. Ọ na-enyekwa m nsogbu mgbe ọ bụla ọ hụrụ m. O megidere ihe a ruo otu afọ. O nwere otu ụbọchị naanị mụ na ya nọ klas, ya abịawa ebe m nọ. Ihe m mere bụ si n’oche malie, gbapụ n’èzí.”
Ugomma nwere ike iche na ihe a bụ àgwà ụmụ okorobịa.
Gịnị mere na iche otú ahụ adịghị mma? O yiri ka onye ahụ agaghị agbanwe ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na-eche na o nweghị ihe o mere, na ọ bụ àgwà ụmụ okorobịa.
Kama iche otú ahụ, ewerela ya na ọ bụ ihe egwuregwu ma ọ bụkwanụ chịwa ọchị. Mee ka ọ ghọta na ihe ahụ ọ na-eme na-ewe gị iwe, nakwa na o kwesịghị ịnwa ya anwa mgbe ọzọ.
IHE MERE EME:
Ifeoma kwuru, sị: “Anaghị m achọ ịgwa ndị mmadụ okwu ọjọọ. Ọ bụ ya mere na mgbe ọ bụla ụmụ okorobịa na-egwusa m egwuregwu iberiibe ma ọ bụ na-agwa m okwu iberiibe, m na-agwa ha kwụsị ya. Ma, ọnụ anaghị aka m mgbe m na-agwa ha ya. Ọ na-abụ m na-agwa ha ya, mụ ana-amụmụ ọnụ ọchị. Ha na-eche na ihe ahụ ha na-eme m dị m mma.”
A sị na ị bụ Ifeoma, gịnị ka ị gaara àgwà ụmụ okorobịa ahụ? Gịnị mere ị gaara eji gwa ha ya?
Gịnị ka ị ga-eme, mmadụ echewe na ihe ọ na-eme gị ma ọ bụ na ihe ọ na-agwa gị dị gị mma?
Ugochi kwuru, sị: “O nwere ụmụ okorobịa mụ na ha nọ na klas. Ha bidoro gwawa m okwu iberiibe. M gbachiri ha nkịtị ruo izu ụfọdụ, ma ha akwụsịghị ya. Kama, ha nọ na-agwa m nke ka njọ. Ihe ha bidoziri ime bụ ebe ọ bụla ha hụrụ m, ha abịa nọrọ m n’akụkụ konye m aka. M na-akwapụ ha, ma ha akwụsịghị ya. Otu ụbọchị, otu n’ime ha dere okwu iberiibe n’akwụkwọ, nye m. M gara nye onye nkụzi anyị akwụkwọ ahụ. Nke a mere ka a chụọ ya n’ụlọ akwụkwọ. Ihe a mere ka m ghọta na m gaara aga kọọrọ onye nkụzi anyị mgbe ahụ ha malitere ịgwa m okwu iberiibe.”
Olee ihe i chere mere na Ugochi agaghị kọọrọ onye nkụzi ha mgbe ahụ ha ka malitere ịgwa ya okwu iberiibe? Ì chere na otú ahụ ọ na-agaghị kọọrọ onye nkụzi ha dị mma? Ọ bụrụ na ọ dị mma, gịnị mere i ji chee na ọ dị mma? Ọ bụrụ na ọ dịghị mma, oleekwa ihe mere i ji chee otú ahụ?
Ebere kwuru, sị: “O nwere otu ụbọchị nwanne m nwoke aha ya bụ Onyema na-asa ahụ́, otu nwa okorobịa abata n’ebe ahụ. Ọ gwara Onyema ka o susuo ya ọnụ, ma ọ jụrụ. O siri ọnwụ na Onyema ga-esusurịrị ya ọnụ. O kweghị apụ ruo mgbe Onyema kwapụrụ ya.”
Ì chere na ọ bụ egwuregwu iberiibe ka nwa okorobịa ahụ gwusara Onyema? Ọ bụrụ na i chere na ọ bụ ya, gịnị mere i ji chee otú ahụ? Ọ bụrụ na i chere na ọ bụghị ya, oleekwa ihe mere i ji chee otú ahụ?
Olee ihe i chere mere na ụfọdụ ụmụ okorobịa anaghị akọrọ mmadụ ma nwa okorobịa ibe ha gwusa ha egwuregwu iberiibe?
Ì chere na otú ahụ Onyema si kwapụ nwa okorobịa ahụ dị mma? A sị na ị bụ Onyema, gịnị ka ị gaara eme?
Ajụjụ gbasara igwusa mmadụ egwuregwu iberiibe
Uchechi kwuru, sị: “Mgbe m nọ n’ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ụmụ okorobịa na-abịa dọọ aka n’aka uwe ara m. Ha na-agwa m na obi ga-adị m mma ma mụ na ha nwee mmekọahụ.”
Gịnị ka i chere ụmụ okorobịa ahụ na-eme Uchechi?
A Hà gwusawa ya egwuregwu nkịtị?
B Hà chụwa ya?
CH Hà gwusawa ya egwuregwu iberiibe?
Ogechi kwuru, sị: “O nwere otu ụbọchị m nọ na bọs, otu nwa okorobịa ana-agwa m okwu iberiibe ma bịa jide m aka. Akụpụrụ m aka ya ma gwa ya ka o si n’ebe m nọ pụọ. Ọ dị ya ka amaghị m ihe m na-eme.”
Gịnị ka i chere nwa okorobịa ahụ mere Ogechi?
A Ò gwusawa ya egwuregwu nkịtị?
B Ọ̀ chụwa ya?
CH Ò gwusawa ya egwuregwu iberiibe?
Ogonna kwuru, sị: “N’afọ gara aga, o nwere otu nwa okorobịa na-agwakarị m na ihe m masịrị ya. Ọ na-agwakwa m ka m soro ya gaa ebe ọ chọrọ ịga. M na-asị ya mba, ma ọ kwụsịghị inye m nsogbu. Mgbe ụfọdụ, ọ na-adịda m aka n’aka. M na-agwa ya kwụsị ya, ma ọ naghị ekwe. Otu ụbọchị m nọ na-ekezi akpụkpọ ụkwụ m, ya abịa kụtụ m aka n’ike.”
Gịnị ka i chere nwa okorobịa ahụ na-eme Ogonna?
Azịza ajụjụ atọ a bụ CH.
Olee ihe dị iche n’igwusa mmadụ egwuregwu iberiibe na ịchụ onye ahụ achụ? Oleekwa ihe dị iche n’igwusa mmadụ egwuregwu iberiibe na igwusa onye ahụ egwuregwu nkịtị? Nwa agbọghọ aha ya bụ Adaeze kwuru, sị: “Ọ bụ naanị onye na-egwusa mmadụ egwuregwu iberiibe ka ihe ahụ ọ na-eme na-atọ ụtọ. Ọ naghị atọ onye ọ na-egwusa ya ụtọ. Ị gwagodị onye ahụ kwụsị ya, ọ naghị akwụsị.” Okwu gbasara igwusa mmadụ egwuregwu iberiibe abụghị obere okwu. O nwere ike ime ka onye ana-egwusa ya ghara ịna-eme nke ọma n’ụlọ akwụkwọ, meekwa ka obi ghara ịna-eru ya ala. Onye ahụ nwekwara ike mechaa dinaa ya n’ike.
Gụọkwa isiokwu bụ́: Gịnị Ka M Ga-eme Ka A Ghara Idina M n’Ike?
Ọtụtụ ndị a na-achọ okwu chere na e nweghị onye ga-enyere ha aka. Isiokwu a kọwara ihe i nwere ike ime ma mmadụ chọwa gị okwu.
Ihe Ndị Na-eto Eto Kwuru Gbasara Egwuregwu Iberiibe
Lee vidio a ka ị hụ ihe ndị na-eto eto ise kwuru gbasara egwuregwu iberiibe na ihe mmadụ ga-eme ma e gwusawa ya ụdị egwuregwu ahụ.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Ka M Ga-eme Ma Mmadụ Gwusawa M Egwuregwu Iberiibe?
ijwyp isiokwu 9